Majiraan meelo indhoole oo dheeri ah oo leh howlaha Mosaic - Geofumadas
Majiraan meelo indhoole oo dheeri ah oo leh howlaha Mosaic
Sebtember, 2019 Geospatial - GIS, tabo cusub
Shaki la'aan, kiiska ugu fiican marka la shaqeynayo sawirrada dayax gacmeedku waa in la helo sawirrada ugu habboon ee ku habboon kiiska adeegsiga, dheh, Sentinel-2 ama Landsat-8, kuwaas oo si kalsooni leh u daboolaya aagga aad xiiseyneyso (AOI); sidaa daraadeed, waxay u oggolaaneysaa in si dhakhso leh loo helo xog sax ah oo qiimo leh natiijada ka dhalatay.
Mararka qaarkood, qeybo ka mid ah AOI-gaaga, gaar ahaan AOI-yada waaweyn ee daboolaya dhowr masraxa, iyo sidoo kale AOI-yada ku yaal meel u dhow ama geesaha masraxa, ayaa laga yaabaa inay ka sii gudbaan xuduudaha aagga hadda. Dhibaatooyinkaas ku soo biirista sawirrada isugeynta waxay u horseedi karaan qayb ka mid ah falanqaynta iyo luminta macluumaad qiimo leh.
Muuse wuxuu ku dhashay si loo xalliyo dhibaatooyinka midowga sawirrada
Mosaic waxaa loo qaabeeyey xoqis ahaan fududahay in la isticmaalo howlo kuu oggolaanaya inaad isu keento, isku dariso oo aad aragto muuqaallo kooxeed oo ka socda dareemayaal, masawir, sawir AOI gaar ah iyo waqtiga xogta loo baahan yahay.
Dhamaan muuqaallada diyaar u ah taariikhda loo baahan yahay waa la isku daraa AOI-da waxaa lagu daboolaa 100%.
Xalku waa mid fudud oo wax ku ool ah waana wax la yaab leh in horay sidan oo kale aan loo qaban.
Aasaaska Mosaic ayaa laga heli karaa aaladda GIS
Waxaa jira qaabab kala duwan Si aad u abuurto Mosaic kuu gaar ah, waxaad si dhakhso ah u dooran kartaa midka kugu habboon baahiyahaaga.
Caymiska adduunka ee Mosaic
Mosaic waxaa lagu soo daray dhammaan kaararka dayax gacmeed maalintii.
Mosaic waxaa si adag loogu abuuray aaggaga danta (AOI).
Sidee buu Mosaic uga shaqeeyaa LandViewer?
LandViewer (LV), taa baddalkeed, waxay bixisaa iskudhafyo qaabab isku dhafan, taas oo ah, isticmaalaha ayaa soo jiidanaya AOI. Kadibna, nidaamku wuxuu ku habeyaa AOI sanduuq joomatari qaas ah oo lagu qeexay AOI, iyadoo loo eegayo sawirrada la bixin doono. Tusaale ahaan, marka ay dhacdo in AOI uu yahay wareegsan, mosaiki waxaa lagu matali doonaa gudaha laba jibbaaran.
Waxay kuxirantahay habka AOI loo aasaasay, adeegsaduhu wuxuu heli doonaa mid ka mid ah natiijooyinka soo socda:
Hadaad calaamadaha ugu tuurto khariiddada, softiweerku wuxuu soo saari doonaa liis garaafyo shaqsiyeed, sidaad horeyba u sameysay.
Haddii aad sawirto AOI weyn ama AOI oo ku yaal geeska laba muuqaal ama in ka badan, Mosaic ayaa lagu dhammeystiri doonaa natiijooyinka raadinta
Shuruudda kaliya ee lagu bilaabi karo Mosaic waa AOI
Markaad sawirto AOI ee daboolaya dhowr muuqaal, shaandhayso daruuriga oo dejisay geeska qorraxda ee qorraxda, nidaamku wuxuu soo bandhigayaa natiijooyinka raadinta Mosaic oo leh muuqaal hordhac ah oo ku saleysan cabbir otomaatig ah. Tirada tirooyinka Mosaic waxaa lagu cayimay kaararka horudhaca.
Awoodaha Muhiimka ah ee Mosaic
Waxaan gaarnay halka ugu muhiimsan. Maxaa kale oo aan ku samayn karnaa Muuse? Markaan ku aragno Mosaic khariidada, waxaan ku sii wadi karnaa xulashooyinka soo socda:
Codso tusmooyinka iyo iskudhafka koofiyadaha, kuwa caadiga ah iyo kuwa caadada u ah.
Deji iftiin iyo kala-bixin fiditaan.
Falanqaynta biraawsarka (soosocda goor dhaw)
La soco oo cabiro sida astaamaha aag gaar ah ay isu beddeleen inta u dhaxaysa labo ama in ka badan oo waqti ah oo ku saabsan Waxqabadka Bedelka.
Wuxuu ku shaqeeyaa maareynta aagagga waxtarka leh iyadoo loo eegayo tirooyinka qiyaasta tirakoobka, iyadoo la adeegsanayo shaqada Wadajirka.
Xaqiiji firfircoonida koritaanka doogga ee deegaankaaga daneyneyso (AOI) muddo aad u dheer xulashooyinka taxanaha Waqtiga
Abuur soo jiidasho leh GIF ama sheekooyin fiidiyoow ah oo la wadaag xogtaada isticmaaleyaasha kale ee khadka tooska ah animation Wakhtiga-luminta.
Soo dejiso xulashooyinka laga heli karo LandViewer
Saddex nooc oo kala soo bax ah ayaa lagu dabakhi karaa Mosaic, kuwan waa Muuqaal, Falanqeyn ama Index, iyadoo kuxiran shuruudaha isticmaaleha.
Fiiro gaar ah: isticmaalegu wuxuu dooranayaa nooca soo dejinta «Mosaic» ama «Qeybaha waaweyn». Farqiga u dhexeeya labadan xulasho ayaa ku jira xogta ugu dambeysa ee loo soo bandhigi doono adeegsadaha: nidaamku wuxuu soo dejinayaa masraxa mideysan ee xulashada "Mosaic"; Nidaamka wuxuu soo dejinayaa jajabyada tirooyinka ah liistada haddii xuduuda «Xabbado masiixi ah» la xusho.
Muuqaal: haddii ay dhacdo inaad doorato nooca Visual, macluumaadka natiijada waxaa lagu bixin doonaa JPEG, KMZ iyo qaababka faylasha ee “GeoTIFF” oo leh muuqaallo iskujira (tusaale ahaan, dhammaan mashiinnada ku dhaca AOI oo aan gudubin).
Analytics: natiijada soo dejinta oo leh Analytics la soo xulay wuxuu noqon doonaa fayl ka mid ah guutooyinka la midoobay, oo aan lahayn metadata (tusaale ahaan [GeoTiff1: B02, GeoTiff2: B03, GeoTiff3: B04, GeoTiff4: B05.]).
Nooca Index, xogta ka dhalata mooshinka waxaa loo soo bandhigi doonaa fayl TIFF ah
Tusmada: Xusuusnow "Soo degso dalag" xulashada. Goynta mashiinka mosaiki waxaa loo sameeyaa iyada oo loo eegayo cabbiraadaha isticmaaleha, taas oo ah, joomatari bbox-ka uu cayimay isticmaale. Xaaladaha aan xuduuda goynta la dhigin, muuqaallada dhammaantood waa la soo dejinayaa.
Mosaic ku dhaqanka
Adeegso kiis 1: Korjoogteynta horumarinta dhismaha, Dubai.
Ujeeddo: ogaanshaha horumarka laga gaadhay dhismaha dhul ballaadhan oo dano leh (AOI)
Bartilmaameedka Bartilmaameedka: dhammaan shirkadaha ka shaqeeya warshadaha dhismaha
Dhibaatada: Isticmaalaha ayaa dejiyay ama xirey aagga xiisaha leh wuxuuna doortay sawirka laga qaaday July 19 laga bilaabo 2019. Shaashadda ayaa si cad u muujineysa in sawirka shaqsiga uusan dabooleynin xiisaha oo dhan.
Xalka: Xaaladdan oo kale, adeegsaduhu waa inuu doortaa kaarka preview-ka oo leh tiro munaasib ah oo muuqaallo ah oo gebi ahaanba daboolaya AOI-da, natiijooyinka raadinta ee la soo saaray, oo guji qeybta "Mosaic".
Gabagabo: Mosaic wuxuu oggol yahay la socodka meelaha waaweyn.
Markii hore, la socodka meelaha waaweyn waxay ubaahantahay isticmaaleha inuu isu rogo inta udhaxeysa muuqaallada isla markaana uu ku mideeyo gacanta. Hawshani aad bay u dhib badnayd oo wakhti dheer qaadatay. Wixii hadda ka dambeeya, wax walba waa dhakhso oo fudud: habeynta AOI-gaaga iyo LandViewer ayaa si otomaatig ah u maamuli doona inta hartay.
Dacwadda loo isticmaalo '2 use': La socodka dabka California
Ujeeddo: Qeex aagga waxyeelladu gaadhay, taas oo ah, adeegso tusmada 'NBR' oo soo degso goobta Mosaic.
Tilmaanta: Bishii Nofeembar ee 2018, ayaa dab weyn ka kacay California oo ay ku dhinteen ugu yaraan dadka 85. Ku dhawaad ​​afar iyo toban kun (14,000) guryo ayaa burburay, ku dhawaad ​​boqol iyo shan iyo toban kun (115,000) hektar oo duur ah ayaa la waayey. Maamulka maxalliga ah waxay ugu yeereen dabka ugu weyn taariikhda gobolka. Faallooyinkaani maahan wax la yaab leh, in kasta oo xaqiiqda ah in kabadan boqol kun (100,000) hektar sidoo kale lagu waayey sanadkii hore.
Maamulka maxalliga ah ee Kaliforniya ayaa geeyay ku dhawaad ​​shan kun oo dab-damiyayaal ah si ay u bakhtiiyaan dabka, kuwaas oo si aan caadi aheyn ugu guuleystey inuu sii wado dabka, kaasoo meelaha qaarkood ku faafay xawaare dhan kiiloo mitir 130 saacadiiba.
Xalka: Si loo go'aamiyo waxyeelada gobollada dhibaatadu saameysey, waxaa lagama maarmaan ah in la isbarbar dhigo ka hor oo lagu dhejiyo mosaics masiibada aaladda loo yaqaan 'NBR index'
1 Tallaabo: ka soo jiid ama ku shub AOI meesha aad xiisaynayso oo dejiso taariikh ka hor musiibada.
Muuqaal ka hor musiibada 1: Natiijooyinka matalaya moosa ee wadarta guud ee aagagga danta (AOI).
Tallaabada 2: Dooro kaarka horudhaca ah Mosaic, u gudub tabanka "Isku-darka", ka dibna dooro tusmada 'NDR Index'. Tallaabadan, nidaamku wuxuu soo bandhigayaa qiimayaasha tixraaca xisaabinta, oo lagu muujiyey cagaar-cagaar. Marka ku xigta, ku sii wad tabinta «Dejinta» oo dooro aagga aad ugu baahan tahay xogta la codsaday.
Sawirka 2: goobta uu ku yaal muuqaalka 'NBR index' wuxuu muujinayaa xaaladda inta uu dabku socday.
3 Tallaabo: Xullo muuqaalka musiibada ka dambeeya isla aagga danta (AOI).
Muuqaal ka hor musiibada 3: natiijada matalaysa Mosaic dhammaan aagga danta (AOI).
4 Tallaabo: Hel natiijooyinka soosaarka Mosaic adoo adeegsanaya tusaha NBR, adoo raacaya qaab isku mid ah algorithms-ka oo laga helay tallaabada 3.
Sawirka natiijada 4: Muuqaalka musiibada ka dib ayaa muujinaya aagga ay dhibaatadu gaadhay isla markaana aad u aragtaa burburka.
Natiijada: Aagagga ay dhibaatadu saameysey waxaa lagu muujiyey guduud. Isbarbardhiga sawirada ka hor iyo ka dib masiibada qiyaasta tirakoobka NBR, waxaan qiimeyn karnaa waxyeelada.
U oggolow Muuse inuu shaqada kuu qabto
Gabagabadii, Mosaic wuxuu bixiyaa xalka u gaarka ah si loo helo muuqaal gabi ahaanba daboolaya aagga aad xiiseyneyso, iyadoo aan loo eegeynin cabirka, oo leh natiijooyinka ugu fiican. Mosaic waxay u oggolaaneysaa isku darka sawirro maalinle ah oo dayax gacmeed laga helo dareemayaal meel la dejiyay, horay loo go'aamiyay ama tilmaamo loo habeeyay duullimaadka, iyo suurtagalnimada soo-deynta muuqaallada falanqaynta dambe. Ku salaamo xulashada xulashada gacanta, bedelka sawirka, meelaha banaan oo muuqaalka buugga lagu daro, weligiis.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan Mosaic, ka eeg hagaha isticmaalaha LandViewer ama noogu soo dir emaylka support@eos.com
Post Previous«Previous STAAD - abuuro qaabeyn qiimo-jaban leh isla markaana naqshadeysan oo loo dejiyay si looga hortago culeysyada dhismaha - Galbeedka Hindiya
Post Next Dib-u-qeexida fikradda Geo-InjineerNext »
Hal Jawaab "Aagag indho la'aan oo dheeri ah oo leh howlaha Mosaic"
Wow, waligey taas maan ogayn. aad baad u mahadsantahay